Motorola P40 wuxuu la imaan doonaa shaashad daloolan iyo Exynos 9610 SoC | Androidsis
Motorola P40: Telefoonka Koowaad ee Shaashadda ee Shirkadda ayaa la imaan doona Exynos 9610 SoC
Xog si qarsoodi ah loo helay ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan laba ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo socda ee Motorola ay soo bandhigi karaan Samsung's Exynos taxanaha processor-ka. Macluumaadka cusub ee ay wadaagaan 91mobile ayaa shaaca ka qaaday Motorola P40 ee soo socota waxaa ku shaqeyn doona Exynos 9610 chipset ka soo Samsung.
Motorola P40 waxaa horey loogu xaman jiray inuu ku shaqeynayo Snapdragon 675 chipset. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka cusubi wuu diidayaa tan wuxuuna tilmaamayaa jasiiradda Kuuriyada Koofureed. Raadi faahfaahin dheeraad ah!
Taleefanka casriga ah ayaa lagu xantaa in lagu sii daayo noocyo badan sida 32GB kaydinta + 3GB RAM, kaydinta 64GB + 4GB RAM, iyo kaydinta 128GB + 4GB RAM.
Bixinta Motorola P40
Motorola P40 wuxuu noqonayaa taleefankii ugu horreeyay ee ay shirkaddu la timaado shaashad daloolsan. Sida taleefankii kaa horreeyay Motorola P30, taleefanka ayaa sidoo kale la filayaa inuu ku daro 40-megapixel dareemayaal ah kamaraddeeda gadaal dhajisan.
Daadadka hore waxay soo jeediyeen in dareemaheeda labaad uu noqon karo 5 megapixels. Si ka duwan taleefoonka P30, ku-xigeenkiisa ayaa lagu wadaa inuu la yimaado taageero ku xirnaanta NFC. Dadku waxay dhahaan taleefanka casriga ahi wuxuu la socdaa batari dhan 3,500 Mah. Waxaa la filayaa inay ku timaado noocyo kala duwan sida Buluug iyo Dahab.
Macluumaad lagama heli karo taariikhda la siidaayo Motorola P40. Sidoo kale, ma jiraan wax daadanaya oo ku saabsan qiimaha taleefannada casriga ah. Shirkadda Lenovo waxay ka hirgelisay Motorola P30 gaar ahaan Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, Xanta bilowga ah ee P40 ayaa sheegtay in taleefanka laga furayo meel ka baxsan Shiinaha. Sannadkii hore, marka laga reebo taleefanka Shiinaha ee gaarka loo leeyahay ee P30, Motorola waxay soo saartay taleefannada casriga ah P30 Fiiro gaar ah iyo P30 Play oo siday u kala horreeyeen laga heli jiray meel ka baxsan Shiinaha sida Motorola One Power y Motorola Mid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola P40: Telefoonka Koowaad ee Shaashadda ee Shirkadda ayaa la imaan doona Exynos 9610 SoC
Bixiyaha cusub ee LG G8 ThinQ wuxuu ka tagayaa muuqaalka guud ee calanka oo muuqda
7 WhatsApp waxay shaqeysaa qof walba inuu ogaado laakiin qof kastaa ma oga